Abasebenzisi be-pixel 4 bahlupheka kwizikrini ezidanyazayo emva kohlaziyo lwamva nje lwe-Android 11 beta
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Abasebenzisi bePixel 4 bahlupheka kwizikrini ezibengezelayo emva kohlaziyo lwamva nje lwe-Android 11 beta
Ekuqaleni kwale veki uphando yehla i-Android 11 beta 2. Nokuba le yinxalenye yenkqubo ye-beta kawonke-wonke ye-Android, siyakuxwayisa ngalo lonke ixesha ukuba ungafaki isoftware ye-beta kumqhubi wakho wemihla ngemihla ngenxa yeziphene. Yinto enye ukufaka i-Pixel 2 yokugcina kunye nokuqokelela uthuli kwidrowa, enye into yokuba unePixel 2 okanye entsha ethembele kuyo ukuze uhlale unxibelelana nosapho lwakho, umphathi wakho okanye abathengi.
Nantsi iapos ngumzekelo omkhulu wento enokwenzeka. Abanini bePixel 4 ukhalaze kwiReddit malunga ne-bug ebangela ukuba isikrini kwifowuni yabo sidanyaze. Okokuqala, kufuneka siveze ukuba uhlaziyo lususile inqaku elivumela abasebenzisi bePixel 4 ukuba baphoqelele i-90Hz yokuhlaziya inqanaba ukuba ihlale ivunyelwe nakwizinto zokusebenza apho inqanaba lalihlala libuyele kwi-60Hz ngokuzenzekelayo. Kwaye lutshintsho lwenqanaba lokuhlaziya abasebenzisi abalibeka ityala ngokuqhwanyaza kwesikrini. Umsebenzisi omnye uthe, 'KuWhatsApp kuhamba nje iibhonchers kunye nokutshintsha phakathi kwe-60Hz kunye ne-90Hz ngalo lonke ixesha, kukhokelela kulwabi olubi. Umgcini omnye ophethe isiphatho seTinyBirdperson ubhale wathi, 'Ewe, kubonakala ngathi babeka iscreen kwi-60hz ukuba ayitshintshi kwizakhelo ezimbalwa, kwaye ngalo lonke ixesha itshintsha inyukela kwi-90hz. Ngelixa ndichwetheza oku, isikrini siyadanyaza ngalo lonke ixesha isikhombisi sivela okanye sinyamalala. Ndiyathemba ukuba, & ampos; baya kongeza ukhetho lokukhubaza le asap. '
Abanye abasebenzisi bePixel 4 abafake i-beta ye-Android 11 yamva nje baphethwe siscreen sokudanyaza esinxulumene ne-90Hz Smooth
Kukho ukusebenza kwengqondo okuqhelekileyo, kodwa abasebenzisi bePixel 4 kunye nePixel 4 XL abayi konwaba ngayo. Ngokucima ukhetho 'lweSmooth show', i-flicker kufuneka inyamalale kwiscreen. Kodwa oko kuthetha ukuphelisa i-90Hz yokuhlaziya inqanaba kunye nokubuyela kwisikolo esidala ireyithi ye-60Hz ngalo lonke ixesha. Kwinqanaba langaphambili, izikrini zihlaziya amaxesha angama-90 ngomzuzwana ngelixa kwisantya sokugqibela, bahlaziya amaxesha angama-60 ngomzuzwana. Amaxabiso ohlaziyo olukhawulezayo ahambisa ukuskrola okuthe tyaba kunye nokuphuculwa komdlalo ophathwayo.
Uthotho lwePixel 4 lubonisa inqaku 'leSmooth show' evumela inqanaba lokuhlaziya ngokukhawuleza ukuba linikwe amandla ngaphandle kokuba inqanaba lokuhlaziya eliphezulu alibalulekanga kumava omsebenzisi. Oku kwenzelwa ukugcina ubomi bebhetri, njengabasebenzisi abaninzi bePixel 4, kwi-premium. Mhlawumbi uGoogle uza kuwusombulula lo mbandela kungekudala ngohlaziyo oluzayo lwesoftware.
I-galaxy tab s 8.4 ukuhlaziywa kwe-lollipop
Ngaba iphone 12 ixabisile
I-T-Mobile isungula izicwangciso ze-5G ezingahambelaniyo kumashishini amancinci
Uyifumana njani iKhowudi yokuPhendula ngeSelenium WebDriver
Eyona nto iqhubayo nge-AT & T okwangoku
Ungamlinganisa njani ukuphakama komntu kunye neapos; kunye ne-iPhone 12 Pro
Njani: Qalisa i-LG G2 yeVerizon, AT & T, T-Mobile kunye neemakethi zaseKorea
Ungazikhuphela njani iimephu ezingaxhunyiwe kwi-intanethi ngeGoogle Maps (i-iPhone kunye nesifundo se-Android)